တောတောင်တွေကို စောင့်ရှောက်ကြပါစို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » တောတောင်တွေကို စောင့်ရှောက်ကြပါစို့ 
တောတောင်တွေကို စောင့်ရှောက်ကြပါစို့ 
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Jan 1, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 16 comments
မုဆိုးရဲ့လေးတောင်ကျားပါ(အရေခွံ)
နေက်ပုံတွေ ထပ်တင်ပေးချင်ပေမယ့် ကော်နက်ရှင်နှိပ်စက်ပါပီ။ပြောချင်တာကတော့ မပျက်စီးသေးတဲ့ ရေဝေရေလလွဲ ဒေသတွေကို တရုတ်တွေကို လွဲပြောင်းပေးပြီးတောတွေပြုန်းအောင်လုပ်နေတာင်္တေ ရပ်တန့် ပေးစေချင်လို့ ပါ။တကယ်ကို လှတဲ့တောတောင်တွေနဲ့ တောပျော်သားကောင်တွေအပေါ် စောင့်ရှောက်ပေးစေချင်လို့ ပါဗျာ။
ငယ်ငယ်က ဆင်တစ်ခါစီးတစ်ကျပ်နဲ့ စီးတာ သတိရသေးတော့တယ်။
အသက်ကြီးရင် ဆင်စီးပါတဲ့ ၊ အခုတော့ စာဆိုအတိုင်းဆင်တုန်းမနွယ်ပဲစီးတော့မယ်ကွယ်။
တောက်တဲ့ ကတကယ်ရှိရင် ရောင်းမယ့်အကောင်လား။မွေးထားတာလား။
ကျားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ အံ့သြတယ်ဗျို့ ။ဘယ်မှာရိုက်ထားတာလဲ။
ခုလေ ကြားနေရတာလေးတစ်ခုမေးချင်လို့သံတွဲချောင်းဖျားကို
တောတွေအားလုံးမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ ဘာလုပ်မယ်ကြားထား
လဲ။တရုတ်တွေ ချောင်းဖျားဒေသတွေမှာ ခြေချင်းလိမ်နေတယ်
တောက်တဲ့ သွားဝယ်တာလား စာရေးသူ …။
အဆင်ပြေရင် ပွဲခ ဒိုင်ပင်ထိုးမလို့….။
သစ်ပင်မခုတ်ရ နတ်မကြိုက်.. စာသားတွေတော့ သစ်တပင်ခုတ် ထောင် ၃လထက် စာရင် အလယ်ပိုင်းက တောထဲမှာ တော်တော် အောင်မြင်တယ်။
အဲဒီမှာ တခုခု စဉ်းစားပေါ့..
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆူးခင်များ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဖက်မှာတော့ နတ်ကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ အပင်မှရွေးခုတ်နေကြတာပါ။
အပင်ပိုကြီးတယ်လေနော်။ ပွဲခ လိုချင်တဲ့ ကိုဂျစ်ပစီလဲ ပွဲခရစေချင်ပါတယ်။ရော့ယူပါဗျား။
သိသူနဲ့..မသိသူတွေ.. ဒီနတ်ဆိုတာကို.. ပညာသားပါပါသုံးနေကြတယ်ပဲ မှတ်ပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့.. ဒီကလေးကွက်တွေနဲ့ပဲ.. စားစားကြသွားတာ.. များခဲ့လှပေါ့..
ငရဲနဲ့ခြောက်..ဘုံနဲ့မြောက်တာတွေက.. လုပ်စားနေသူတွေကသာ.. အထူးလူတန်းစားဖြစ်သွားပြီး…. ရွှေဘုံပေါ်နေလိုက်ရတဲ့.. ဓလေ့စရိုက်တွေ သွပ်သွင်းသွားစေတာပါ..။
အပင်ခုတ်ရင် ဖြစ်လာမဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို.. ဖလိုင်ယာလေးလုပ်.. ကျေးရွာတွေအထိကွင်းဆင်း.. သင်ကြားပေးရမဲ့.. ဗော်လန်တီယာတွေလိုတယ်..။ တီဗီတွေမှာ.. ကိုရီးယားကားတွေပြနေမဲ့အစား.. နေရှင်နယ်ဂျီရိုဂရပ်ဖစ်လို.. သဘာ၀၀န်းကျင်..ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေ.. ပုံမှန်ပြသင့်တယ်..။
ဥပဒေအရ.. သစ်တပင်ခုတ်ရင်.. ထောင်ချတာထက်.. လျှော်ကြေးပေးရမဲ့.. စံနစ်ဥပဒေလုပ်လိုက်ပြီး.. သတင်းပေးသူကို.. လျှော်ကြေးရဲ့.. ၂၅ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ပေးတာမျိုးနဲ့.. အချင်းချင်းထိန်းကြောင်းတာမျိုးလုပ်ကြည့်သင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ခုတော့ကွန်နက်ရှင်ကနှိပ်စက်တုန်းမို့ပြန်edit လုပ်ပြီး. ကွန်းလေးတဝိုက်မှာ snorkelling and scuba diving ပုံလေးတွေ
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။တကယ်တော့ အသိပညာပေးလေးတွေကို ကွင်းဆင်းပညာပေးလုပ်သင့်ပါတယ်။ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ဆိုလဲ
ကောင်းပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ မလုပ်နိုင်သေးပေမယ့်၊တနေ့ ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
Actually, it is carefully noticed about Chinese companies by local governments because Chinese are not afraid to destroy our own environments carelessly ( for one example : gold mining at the Kachin state ).
ကိုလွင်မောင် အကြံပြုတာလေးက သတိမူစရာပါဗျာ။
တရုတ်မလေးတွေကိုပဲ မြန်မာပြည်တွင်းဝင် ကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်ရမယ်လို့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်သင့်တယ်။ ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး မိန်းမဆိုတော့ သဘာဝရေမြေတောတောင်ကို ပိုချစ်တတ် ခံစားတတ်မလားလို့… အဟီး…
ကျွန်တော်လည်း…တောတောင် တွေ ကို အရမ်း ချစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ..ကျွန်တော် အချစ်ဆုံးအရာတွေ.များလှပါတယ် ။
အမေစု ပါမယ် …၊ ဧရာဝတီ..ပါမယ် ။ သံလွင် ပါမယ် ..။ ရေခဲ.နေတဲ့ တောင်တွေ..ပါမယ် ။
ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီး..ကို မပျက်စီး.အောင် ၀ိုင်းဝန်း…ထိန်းသိမ်းကြဖို့ .ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာ.တာဝန်ရှိတယ်..လို့သိထားပါတယ် ။
အခု လို ပုံလေးတွေ..နဲ့ .ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြ ပေးလို့ ကျေးဇူးပါပဲ..
ဒီပို့ စ်ကတင်ထားတာတော့ ကြာပီပေါ့ဗျာ။ဒါပေမယ့် ဗျာ ကျနော်ခရီးသွားတော့